Swimmer ayaa lagu diley weerar naadir ah oo loo geystey New Zealand
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka New Zealand » Swimmer ayaa lagu diley weerar naadir ah oo loo geystey New Zealand
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
New Zealand waxay diiwaangelineysaa dhimashadi ugu horreysay ee weerar shark tan iyo 2013
Haweeney ka mid ahayd dadka u dalxiis taga xeebta ayaa lagu dilay weerar nadir ah oo loo yaqaan 'shark' oo maanta ka dhacay New Zealand.
Dhibanaha weerarka ayaa laga soo saaray biyaha iyadoo wali nool laakiin goobta ayay ku dhimatay inkasta oo dhamaan iskudayada lagu badbaadinayo nolosheeda.
Weerarka ayaa ka dhacay Xeebta Waihi oo ku taal Waqooyiga Jasiiradda oo aan ka fogeyn magaalada ugu weyn waddanka ee Auckland.
Weerarada loo yaqaan 'Shark' ayaa ah wax aan caadi ahayn oo ka dhaca New Zealand tanina waxaa loo malaynayaa inay tahay dilkii ugu horreeyay tan iyo 2013. Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo xigatay dad goobjoogayaal ah oo sheegaya in haweeneydu ay dabaal degtay horteeda calanka badbaadada maalintii Khamiista.
Markii ay maqleen qeylada, badbaadiyeyaashu isla markiiba waxay ku baxeen doonyo waxayna ku jiiteen xeebta.
Ma cadda nooca digaaga loo yaqaan ee weerartay haweeneyda, laakiin goob jooge ayaa lagu soo waramayaa inuu ku andacooday inuu ahaa cadaan weyn, nooc ka mid ah oo laga ilaaliyo biyaha hareeraha New Zealand
Mamnuuc toddobo maalmood ah oo xaddidaya gelitaanka aag, ayaa la dhigay xeebta.
Weerarkii ugu dambeeyay ee xayawaan badeed wuxuu ahaa 2018 markii nin lagu dhaawacay - laakiin badbaaday - xeebta Baylys. 170kii sano ee la soo dhaafey, waxaa jirey oo keliya 13 weerarro shark oo dilaa ah oo laga diiwaangeliyey New Zealand.